Xildhibaanada taageersan Madoobe Nuunow oo ka soo horjeestay shirarkii wada tashiga ee ka dhacay Muqdisho iyo kan Garoowe | Calanka Somalia
← Khaatumo State oo laga soo dhaweeyay Norway
Xildhibaanada taageersan Madoobe Nuunow oo ka soo horjeestay shirarkii wada tashiga ee ka dhacay Muqdisho iyo kan Garoowe
Kulan maanta xarunta golaha shacabka Qaranka ee magaalada Muqdisho ay ku yeesheen Xildhibaannada ka soo horjeeda Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxay kaga soo horjeesteen shirarkii wadatashiga ahaa ee lagu kala qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe iyi natiijadii ka soo baxday intaba.
Xildhibaanadan oo tiradoodu gaareysay ku dhowaad 300 ayaa shirkii wadatashiga ahaa ee lagu qabtay Muqdisho shirka ka furmaya Garoowe iyo kii ka horreeyay, waxayna ku tilmaameen kuwo aanay dani ugu jirin shacabka Soomaaliyeed oo ay wataan shaqsiyaad gaar ah iyo dad shihasheeye ah oo danahooda ka dhex eeganaya.
Madoobe Nuunow Maxamed oo gudoomiyaha Baarlaamanka ay doorteen xildhinaano ka tirsan Baarlamanka ayaa sheegay in shirarkaas ay yihiin kuwo aan waafaqsanayn sharciga, ayna go’aansadeen inay ka doodaan codkana u qaadaan, isagoo intaa ku daray dooda shirarkaas maalmihii ugu dambeeyay ay soo wadeen.
Madoobe Nuunow Maxamed ayaa ugu baaqay xildhibaanada cod geliyaan dooddii ku saabsan shirarkii Muqdisho iyo Garoowe “Waxaa kulankan soo xaadiray xildhibaano tiradoodu gaareyso 278 xidlhibaan, 268 ka mid ah way qaadaceen shirarkaas iyo wixii ka soo baxay, lix mudane wey diiday, afar kalena way ka aamuseen,” ayuu yiri Madoobe Nuunow.
Talaaabada xildhibaanada Baarlamanka ku diideen shirarka wadatashiga iyio natiijada ka soo baxdayba ayaa wuxuu ku soo aadeysa xili guddoomiyaha baarlamaanka ee xilkiisu uu muranka ka taagan yahay Shariif Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka duuleen magaalada Muqdisho iyagoo gaaray magaalada Garowe oo ay ka qeyb galayaan shirka wada tashiga wejigiisa 2aad.